VOA Afaan Oromoo: Jawar Mohammed interviews on current leadership crisis in Ethiopia - Ayyaantuu News
6 comments - What do you think? Posted by admin - 06/09/2012 at 4:57 am Categories:
6 Responses to “VOA Afaan Oromoo: Jawar Mohammed interviews on current leadership crisis in Ethiopia”
Obsaa says:	06/09/2012 at 6:34 am	Jawaar Mohaammad siyaasa gaafa Afrikaa keessatti xinxaloota siyaasaa jajjaboo keessaa tokko. Beekumsa siyaasaa gadfagoo qaba. Ammoo afaan sadeenuu[oromoo, Amaariffa, Ingiliffa] bareechee haasaa’a. Kanaafuu raadiyooleen Afaan Oromoo nama jabaa kana wajjin gaaffii fi deebii gochuun ummataaf odeeffannoo ammayyaa dabaruu qabu.
Kumsaa says:	06/09/2012 at 6:48 am	Jawar dhuguma jedhe. Yeroo kana rakkina heddutu Tigroota gidduu jira. Dhaabni isaanii waan addadda qoodameef hamma ammaatti muummicha filachuu dadhabani. Bakka ragaa hin qabnee akka odeeffamu yoo taye, obboo Mallas du’a isaa hin duune. Isaanuma keessaa ajjeesani jedhu. Obboo Mallas duraanuu waan isaan amanuu dadhabeef obboo Dassaalany fidee akka inni dhaaba “EPDR” HOOGGANU TAASISE. Siyyum Masfin Chayinaatti erge. Warra kaanis ofirraa faffageesse. Dasaalany itti haanaa muummicha ministeeratiifi minsiteera dhimma alaa kan taasises beekkuma fi muuxannoo otoo hin taane warra kaan waan sodaatefi(amanuu dadhabeefi).
Jaroonni waarri qaama cewuumsati uumna jedhanii taa’an kun warra Mallas ofirraa faffageesse, Siyyumma faa, Kumaa faa ofitti deebisanii isaanuma keessayyuu eenyu akka filatan wal sodaataniiti taa’u. Niitii Mallas ofitti makuu waan didaniif waan rakkoon jiruufi.
Akka tasaa tayee yoo walii galuu dadhabani ifaan addadda bayan warri garee Mallas turan niitii isaa qabataniiti ka’anii, akka jaroonni isaan kaan Mallas faa qeesicha faa summiin ajjeesan labsanii akka ‘uummanni isaan gargaaru taasisu. Warri kaan immoo akka Mallas nama ajjeessisaa ture, qabeenya namaa saamaa ture lallabaniiti waan balleessan hundaa akka Mallas balleesse fakkeessanii akka uummanni isaan faana tawu godu. Warri maqaa amantiitifi siyaasatiin hidhame haa hiikkatu jedhaniiti Oromoo ofitti qabanii obboo Siiyyum muummicha minsiteraa taasisu. Dasaaleny itti aanadhuma taasisu.
Garuu otoo yeroo kana ‘uummanni Oromoo wal faana ka’ee ijoollee isaa warra mana hidhaatti dararan hiikachiisuu, warra maqaa amantee ISLAAMATIIN rakkisaa jiran akka gad lakkisan gochuun ni danda’ama. Waanni hundinuu yeroo kana namaaf hayyama. Abbaan barbaade amantii barbaadetti amanuun mirga isaa akka taye agarsiisuu danda’a. Garuu —.
dhuga says:	06/09/2012 at 7:09 am	Obbo Kumsaa,
Garuu maal godha dhugaakeeti. Sirritti wal ijaarree, siritti hidhanee, tokkumman harka wal qabanee, humna cimaa tokkon waan walaansoo gocha hin jirreef waanuma diinni keenyaa (diinii oromoo) gocha jiru akka seenaatti haa haasoofnu.
Yeroo daandii meeqaan waa’ee impaeraa biyya sanaa ibsa laanuu hin qaanoofnu.
Mohammed taher umer says:	06/09/2012 at 8:20 am	Obbo johar mohammed Nama siyaasa cimaa toko Nama qabnu keessaa tokya
Waan ta,eef radiyoowwan argamaan tan afaan oromotin dabartu irratti ammaa amma afeeruun ammaa jalalaa address siyaasa ummataa keennaaf ibsuu gafannaa.
Oumar says:	06/09/2012 at 9:15 pm	Jawar Mohammed, thank you for your insightful and brilliant analysis of the current political situation in Ethiopia. I also admire your impeccable command of Afaan Oromoo. Keep it up.
Jabal Balley Goba says:	17/04/2013 at 2:58 am	Jawaar Mohaammad Yaaliinxiiltanttummaa waaee siyaasaafii Raadiyoo aFAAN ADDADDAA irratti gumaaci qabdu Baayyee Baayyee Gaariidhas Haaluma kanaan itti fufi jechaa nagaawojjiin’